चितवनमा २८ जना स्वाइन फ्लुका बिरामी — Himali Sanchar
भरतपुर, ७ भदौ – चितवनमा इन्फ्लुयन्जा ए (एच वान एन वान) अर्थात् स्वाइन फ्लुका बिरामी भेटिएका छन् । चितवन मेडिकल कलेजमा उपचार गराउन आएका विरामीमध्ये एकै महिनामा २८ जना स्वाइन फ्लुका बिरामी भेटिएका हुन् ।
“गत साउन १ गतेबाट भदौ ४ गतेसम्म कलेजमा गरिएको १०२ नमूना परीक्षणमा २८ जनामा स्वाइन फ्लुको किटाणु देखियो”,कलेजका प्रयोगशाला प्रमुख डा. सन्जय यादवले भन्नुभयो ।
यो रोग लागेपछि रुघा, खोकी, ज्वरो, शरीर दुख्ने जस्ता लक्षण बिरामीमा देखिन्छन् । बिरामीको सामान्य अवस्थामा त केही हँुदैन तर पनि कतिपयलाई जटिल अवस्था भएमा निमोनिया हँुदै ‘मल्टि अर्गान फेलर’अर्थात् शरीरका अङ्गले काम नगरेर मानिस मर्नेसम्म हुन्छ । तर चितवनमा यो रोगले मानिसको ज्यान लिएको छ वा छैन भन्ने कुराको यकिन तथ्याङ्क कतै भेटिँदैन । चितवन मेडिकल कलेजमा अहिले पनि यो रोगबाट जटिल अवस्था भएका सात ÷आठ जना बिरामीले आईसीयूमा उपचार गराइरहेका छन् ।
जिल्लाको एक मात्रै सरकारी अस्पताल भरतपुर अस्पतालमा यो रोगका लागि परीक्षण गर्न विशेष युनिट नै स्थापना भएको छ । अस्पतालका रिसर्च टेक्नोलोजिष्ट जेसी राना मेडिकल कलेजका विरामी योे सूचीमा नआएको बताउनुहुन्छ । “सरकारी अस्पतालमा भदौको पहिलो पाँच दिनमै ५२ वटा गरिएको नमुना परीक्षणमा इन्फ्लूयन्जा ए का बिरामी १३ जनामा देखिएको छ”,रानाले भन्नुभयो ।
“थप परीक्षण गरी एच वान एन वान हो वा होइन भनेर स्पष्ट गर्न काठमाडौँ पठाइएको छ । यसको केही दिनमा रिपोर्ट आएपछि मात्रै यसै भन्न सकिन्छ”,उहाँले भन्नुभयो ।
अहिले चितवनमा चितवन मेडिकल कलेजले रगतको माध्यमबाट गरिने परीक्षण ‘आईजीएम इलाइजा’वाट र भरतपुर अस्पतालमा नाक र मुख भित्रको र्याल र सिँगानको परीक्षण गरी स्वाइन फ्लुका किटाणु पहिचान गरिन्छ । भरतपुर अस्पतालका फिजिसियन डा. राजु वानिया इन्फ्लुयन्जा ए (एच वान एन वान)बाट सर्तक रहनुपर्ने धारणा राख्नुहुन्छ ।
“रुघा खोकी मात्रै लाग्यो भनेर बस्नेहरूको अवस्था त परीक्षण सम्म आइपुगेकै छैनन् । जटिल अवस्थाका बिरामीहरुको परिक्षण गर्दा मात्रै पनि यतिका धेरै बिरामी भेटिनु जटिल अवस्था हो”,एक चिकित्सकले भन्नुभयो ।
“चितवन इन्फ्लुयन्जा ए (एच वान एन वान) को जोखिम जिल्ला हो । यस रोगको सङ्क्रमणबाट बृद्धबद्धा,बालबालिका र दीर्घरोगीलाई बढी जोखिम हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
“यो रोग बिरामीबाट अरुलाई नसरोस् भन्न बिरामीले खोक्दा,हाच्छुँउ गर्दा मुख छोप्नुपर्छ । भीडभाड भएको ठाउँमा जानुहँुदैन”,उहाँले जानकारी दिनुभयो । जनचेतना विस्तारका लागि जिल्ला जनस्वास्थ कार्यालयसँग समेत बजेट नभएको अहिलेको अवस्थामा स्थानीय तहहरूले रोग नियन्त्रणका लागि जनचेतना जागाउनु नै उत्तम हुने उहाँको सुझाव छ । (रासस)